Xaflad Si balaaran loo soo agaasimay ayaa ka dhacay Machadka Xifdinta quraanka ee Degmada Baargaal Taasoo Shahaadooyin Lagu Gudoonsiinaayay Ardaydii kaalmaha kowaad ka Gashay Xifdinta Quraanka kariimka.(Daawo sawiro). | raascasayrmedia.com
← Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Soomaaliya oo la doortay
Sarkaal ka tirsanaa Ciidamada Daraawiishta Puntland oo Xalay Lagu Toogtay Degmada Xarfo ee Gobolka Mudug. →
Xaflad Si balaaran loo soo agaasimay ayaa ka dhacay Machadka Xifdinta quraanka ee Degmada Baargaal Taasoo Shahaadooyin Lagu Gudoonsiinaayay Ardaydii kaalmaha kowaad ka Gashay Xifdinta Quraanka kariimka.(Daawo sawiro).
Waxaa galabta lagu qabtay Machadka xifdinta quraanka Aw-Cumar ee ku yaala bartamaha magaalada baargaal xaflad qalin jabin ah oo ay ka soo qaaybagaleen dad aad ubadan laguna gudoonsiinayay shahaadooyin iyo abaalmarinno kala duwan ardaydaas oo ay tiradoodu ahayd 175 arday.
ugu horaayn waxa hakaas barnaamijyo xiiso leh ka jeediyay ardaydii . kadib markii uu dhamaaday barnaamijkii ardaydu waxaa xafladda kahadlay qaar kamida culimada waawayn iyo odayaasha degmada baargaal.
ugu horaayn waxa halkaa hadal aad u qiimo badan kajeeduyay..nabadoon Cumar Siciid Sharmaarka oo kamid ah nabadoonada degmada baargaal.
waxauu nabadoonku kadib markii uu umahad naqay macalimiinta machadka, aad udhiirrigaliyay barashada quraanka kana faa idaaystaan wakhtiga,dhalin yarnimada,iyo barashada xifdinta quraanka ah waxana uu tilmaamay in ay dhallinyaradu maanta haastaan fursad ayna haaysanin dadkii hore ee saxwadu waxa uu kusoo gabagabeeya nabadoonku inaan hamiga layaraayn kuna ducaaysataan buuyidhi cilmiga siyaadadiisa.
waxa isna hadal aad uqiimo badan ka jeeday xaflada nabadoon axmed salaad cabdiraxmaan oo ah nabadoonada degmada ayaa isna ka hadlay taariikhda waxbarasho ee degmada baargaal isagoona sheegay in culimada ugu waayayn somalia intooda badan ay wax ku barteen baargaal isla maarkana ay dad badan baargaal u iman jireen in ay wax ka bartaan. wuxuu mahad gaar ah u soo jeediyay maamulka machadka diiniga ee aw-cumar.
waxa isna halkaa kahadlay sh Cabdilaahi maxmuud saalax oo ku hadlayay afka maamulka machadka waxaana uu sheegay in machadku soo kordhiyay labaqodob oo aha soonoolaaynta xalaqaadka cilmiga iyo soo saarista dad xifdisan quraanka,ka dhisan akhlaaqda.
Gabagabadii waxa goobtaa lagu gudoonsiiyay shahaadooyin ardaydii qalin jabinaaysay sidoo kale waxaay ardaydu shahaadooyin gudoonsiiyeen nabadoon axmed salaad.